Honduras: Noho ny rivomahery “Félix”, nipatrapatraka ny bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Sophie Maupoil
Voadika ny 31 Oktobra 2018 7:25 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 简体中文, 繁體中文, Français, English
Sary an'i Fecke,nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Nirarak'ompana ny lahatsoratra tamin'ny fotoana nanambaràna ny fanatonan'ilay rivomahery Felix ny morondranomasin'i Nikaragoà. Ireo solosaina hiaka farany dia mampiseho an'i Felix nidofotra tao amin'ny morontsiraka avaratr'i Nikaragoà, miroso mankao anatiny ny masony, eo ambonin'ireo faritra avaratra be tendrombohitra ao Honduras. Noho ny tahotra ny ho faharavàna, nasain'ny governemanta ao Honduras nesorina ireo mpizahatany tao Roatan, tao amin'ny nosy Bay, toerana iray izay ny marainan'io, toa mbola tsy noeritreretina mihitsy hiantefan'ny hatezeran'ilay rivomahery. Natalie Grace, avy amin'ny Travel Blog, miresaka momba ny rivomahery Félix :
Nanosika ny kaompania fitaterana an'habakabaka hametraka sidina manokana maimaimpoana avy any Grupo Taca mankao amin'ny tanibe ilay orambatravatra sokajy faha-4. Mipetraka malaky sy miainga avy hatrany indray ireo fiaramanidina mba hahafahana mitatitra mpizahatany betsaka araka izay tratra. Manodidina ny 1.000 ireo olona nesorina avy tao amin'ilay nosy Roatan ao Honduras, fantatra amin'ny fisian'ireo haran-dranomasina sy ireo toerana fisitrihana an-dranomasina ananany. Mbola nisy 1.000 hafa koa nafindra toerana avy any amin'ireo morontsiraka iva sy ireo nosy madinika.
Mitch tamin'ny 1988 no rivomahery goavana indrindra namely farany an'i Honduras. Orambatravatra sokajy faha-5, nitoetra tsy nisy indrafo nandritra ny andro telo manontolo teo ambonin'i Guanaja i Mitch. Zava-nahagaga, olona 10 monja no namoy ny ainy. Na izany aza anefa, nampivarahontsana ny nahita ireo sarim-paharavàna tao amin'ilay nosy. Tapatapaka sy tsy nisy ravina ny rantsan'ireo hazo, tsy nahitàna afa-tsy ny vatany miboridana, toy ireny ‘totems’ ireny. Rehefa nandao an'i Guanaja, nitsofoka nankany anatin'ny firenena i Mitch, toerana namoizana olona maherin'ny fito arivo noho ireo tondradrano nitrangra toy ny tselatra sy noho ny ranom-potaka. Tsy mbola hita tao Honduras izany rivomahery tafiditra lalina tao anatin'ny fireneny izany. Satria nijanona tsy lavitra an'i Hondurasi Mitch nandritra ny efa ho herinandro iray, efa voky rano ny tany. Tsy nisy tamin'ireo mbola velona no nahatsiaro ny hoe nisy rivomahery iray nasiaka be hatrany anatin'ny firenena, toy ny tao Tegucigalpa, ohatra. Katherine Marrow izay mipetraka any aminà tanàna an-tendrombohitra iray somary voaaro ihany no nanoratra momba an'i Félix tao amin'ny bilaoginy, Life in Honduras :
Eny… misy rivomahery iray mizotra mankaty Honduras… ary eny… aty Honduras aho ! Ny vaovao tsara dia mety mba hamindrany fo izahay aty. Tena ao afovoan'i Honduras mihitsy no misy an'i Siguatepeque, ary toerana tsara aro indrindra satria tena afovoany sy anaty tendrombohitra. Efa miomana izahay hoe mety handrivotra be arahana oram-baventy, ho tondraka ny làlana, hisy ny ranom-potaka, sns… Saingy tsy dia zavadoza loatra noho izay mitranga any amin'ny morontsiraka.
La gringa ao amin'ny La Gringa’s Blogicito miteny ao amin'ny bilaoginy hoe, « Raisinay ho resaka matotra i Félix ankehitriny. » Hoy izy mantsy ny mpamaky azy: « Minoa ahy, tena faran'izay tsy mampahazo aina ny manokatra imailaka ary mamaky momba ireo rivomahery mampididoza – indrindra ho an'olona iray izay tsy mbola niaina velively ny atao hoe rivomahery. » Ampiany teny vitsivitsy fampaherezana « Aza tonga dia misaintsaina zavadoza raha toa tsy tafita ny antsonareo » satria samy hiezaka hiantso ny havany sy ny namany daholo ny olona rehetra, anaty fotoana iray mitovy. ». Trish avy amin'ny Sowers for Pastors mandray amin'izao fotoana izao tarika iray mamita iraka, izay, raha rasina ny maha-toerana lavitra ny misy azy any anaty tendrombohitra ao Honduras, tokony hihitsoka anaty ranom-potaka sy ireo toedraharha ratsy eny an-dàlana. Hoy izy:
Ny tena asa saina goavana ho anay dia ireo làlana mampitohy anay amin'ireo tanandehibe mety ho simba be tamin'ny tondrandrano nahazo ireny làlana ireny, ny fihotsahan'ny tany, ny ranom-potaka, ary ny tetezana rava.
Tao anaty lahatsoratra iray teo aloha, tsaroany ny fotoana naha-tao Guanaja azy fony ilay nosy teo an-dalam-piarenana avy amin'ny faharavàna nentin'ilay rivomahery Mitch. « Ho ao am-ponay mandrakariva ny nosy Guanaja sy ireo olona monina ao » hoy ny nosoratany. Niverina any Etazonia i Bob Barnes, izay manoratra ao amin'ny Helicopter Pilot, taorian'ny niainany sy nanamoriany angidimby nandritra ny fotoana voafetra tao amin'ireo nosy Bay. Omeny amin'ny antsipirihany ny vitsivitsy amin'ireo faharavàna naterak'i Mitch, ary manolo-tena izy ny hanampy amin'ny asa fanarenana. « Ary raha toa ianareo ka mila mpanamory angidimby aorian'ny fisindàn'ny orambatravatra, vonona aho ny hiverina sy hanampy. » hoy ny nosoratany. Momba izy, iza no nisaina hanome ny anarana Félix ho an'ilay rivomahery ? Amin'ny teny Latina ny hoe Félix dia midika hoe « Sambatra ». Mikainkona ny rantsako rehefa hitendry ny anarany aho, te-hanoratra hoe « Feliz ». Ho an'ireo mpiray tanindrazana malala ao Honduras, enga anie ianareo hieren-doza ary tsara fiomanana. Antenaiko ny hisindàn'io oram-batravatra io haingana ary tsy hisy ny aina hafoy.